Uyibuyisela njani i-Samsung Galaxy Note 3 yakho
UKUYA yogcino Ikopi yokhuseleko yolwazi kwi-Samsung Galaxy Note 3. Ibandakanya naluphi na ulwazi loqhakamshelwano, umculo, iifoto, iividiyo, kunye neeapps ozifakileyo, kunye nazo naziphi na iisetingi ozenzileyo ukulungiselela ifowuni yakho ngokwezifiso. Ukukopa olu lwazi komnye umthombo yenye yeendlela zokugcina ulwazi lukhuselekile, ukuba kwenzeka nantoni na kwifowuni.
Kwiakhawunti yakho kaGoogle, ulwazi luxhaswa ngokuzenzekelayo. Olu lwazi lubandakanya uluhlu lwakho lwabafowunelwa, imiyalezo ye-Gmail, kunye nokuqeshwa kweekhalenda. Ngenxa yokuba iifowuni ze-Android zivumelanisa ngokuzenzekelayo olu lwazi kwi-Intanethi, i-backup ihlala ikhona. Ngethamsanqa kuwe, ukuba ungumntu othambekileyo ukulibala ukuyigcina ifowuni yakho.
Ukuqinisekisa ukuba ulwazi ngeakhawunti yakho kaGoogle luyaxhaswa, thobela la manyathelo:
Ukuhlanjwa kwamehlo kwe-boric acid
Cofa kwi-General tab kwaye ukhethe into yeAkhawunti.
iziphumo ebezingalindelekanga ze-escitaloprám
Chukumisa i icon eluhlaza eluhlaza ngedilesi yakho ye-Gmail.
Qinisekisa ukuba uphawu lokujonga oluhlaza luvela ngokhetho ngalunye.
isazisi sepilisi m366 emhlophe
Xa kungekho phawu lokutshekisha lukhona, chukumisa isikwere esingwevu ukongeza enye.
Ukuba uneakhawunti engaphezu kwe-Google enye edityaniswe nefowuni, phinda la manyathelo kwiakhawunti nganye.
Unako kwakhona ukugcina ifowuni yakho ngokusebenzisa inkqubo yeKies. Emva kokuqhagamshela ifowuni yakho kwikhompyuter, enye enenkqubo ye-Kies efakiweyo, chukumisa i-Back Up / Buyisela ithebhu. Beka uphawu lokutshekisha ngokhetho Khetha Zonke izinto, emva koko ucofe iqhosha lokuGcina izinto ezikhethiweyo kwifowuni yakho, ugcine ikopi kwikhompyuter.
Ukudityaniswa kweser kwiSpanish
isisombululo se-gentamicin sulfate ophthalmic
Ngaba i-valium ikwenza wozele
iziphumo eziqhelekileyo ebezingalindelekanga
ndingathatha i-benadryl kunye ne-ibuprofen kunye